ငယ်ငယ်က ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ကာရိုက်တာတစ်ခုအတွက် ဖွေးဖွေးရဲ့ ရင်ခုန်သံစကား
ရည်းစား တစ်ဝမ်းကွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက အမှတ်တရ။
ဖွေးဖွေးက မကြာခင်ရုံတင်တော့မယ့် '' ရည်းစားတစ်ဝမ်းကွဲ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ သူူမအတွက်တော့ အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားထဲက သူ့ရဲ့ နာမည်လေးကတော့ အိတုံ(ခ) သဲမဉ္ဇူ ဖူးငုံလင်းလက် ပါတဲ့.
ဖွေးဖွေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော်က ရိုက်ထားတဲ့ ''ရည်းစား တစ်ဝမ်းကွဲ''ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ မကြာခင် ပရိသတ်အရှေ့ကို ရောက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရင်ခုန်လို့နေပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ သူမ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာတော့ တစ်ချိန်က အမှတ်တရတွေကို ပြန်သတိရမိနေပြီလို့ မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်.
'' အဲ့ဒီဇာတ်ကားက ဖွေး ၂၅ နှစ်မှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ. ဗီဒီယို ခေတ်တုန်းက ဖွေးရိုက်ခဲ့တဲ့ ဟာသလေးတွေကိုလည်း ပြန်ပြီးတော့ အမှတ်တရ ခံစားရတာပေါ့. ဖွေးက အသက်အရွယ်အလိုက် Glow ဖြစ်ရတာကို ကြိုက်တယ်. အသက်အရွယ်အလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ကာရိုက်တာကို ရိုက်တယ်. ကိုယ် ငယ်ငယ်တုန်းက ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ကာရိုက်တာလေးတစ်ခုကို ပြန်မြင်ရတာပေါ့'' လို့ သူကဆိုပါတယ်.
ဒီဇာတ်ကားထဲက ဖွေးဖွေးက အိတုံ(ခ) သဲမဉ္ဇူဖူးငုံလင်းလက် ဆိုတဲ့ ခပ်သွက်သွက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်. အမြဲတမ်း လွဲနေတတ်တဲ့ ကာရိုက်တာအကြောင်းကိုလည်း အမှတ်တရအနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ညက ''ရည်းစား တစ်ဝမ်းကွဲ'' ရုပ်ရှင်ကားကြီး အထူးပွဲမှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်.
'' အမှတ်တရ ဖြစ်တာကတော့ အိမ်သာတက်တဲ့အခန်းပေါ့နော်. အဲ့ဒီမှာ သူက Lollipop လည်း စားရဦးမယ်. အိမ်သာကလည်း တက်ရဦးမယ်. နှစ်ခုပေါ့နော်. အိုက်တင်ကလည်း ၂ ခုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ Lollipop လည်း စားလို့ကောင်းတဲ့ အိုက်တင်ရော. အိမ်သာတက်ရလို့ ကောင်းတဲ့ အိုက်တင်ရော လုပ်လိုက်ရော. အဲ့ဒီမှာ စက်အဖွဲ့ကလည်း ရယ်လိုက်. ဦးဇော်တို့ အန်တီသီတာတို့ကလည်း ရယ်လိုက်ဆိုတော့ ခဏခဏပြန်ရိုက်နေရတယ်. အဲ့ဒီ အိုက်တင်လေးကတော့ အမှတ်တရပေါ့နော်. တစ်ခါမှလည်း မလုပ်ဖူးဘူး'' လို့ ဆိုပါတယ်.
''ရည်းစား တစ်ဝမ်းကွဲ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော်က ရိုက်ထားပေမယ့်လည်း ဇာတ်ကားထဲက ဖွေးဖွေးရဲ့ ဖက်ရှင်တွေက ရိုးသွားတာမျိုး မရှိပါဘူး.
'' ဖွေးက ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီဆိုရင် အရှေ့ ၂ နှစ်လောက်ကို ကြိုပြီးတော့ မှန်းရတာပေါ့နော်. ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးတွေ ကြိုကြိုပြီးတော့ စဉ်းစား မိတာပေါ့နော်. ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၄ နှစ်ကျော်လောက် ကြာပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖက်ရှင်လေးတွေ နည်းနည်း ဟောင်းပြီလားလု့ိ ပြန်တွေးမိတယ်'' လို့ ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်.
ရည်းစားတစ်ဝမ်းကွဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က စပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားကို HEART & SOUL နှင့် FRENZO ထုတ်လုပ်ရေး က ထုတ်လုပ်ပြီး စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ဖွေးဖွေး တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်.